Tontolo Iainana : Bilaogy Miresaka ny Tontolo Iainana, Angon-Dahatsoratra Manerantany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2017 6:21 GMT
Miresaka ireo olana marobe mahakasika manokana ny faritra misy azy, nefa mampitebiteby ny erantany ireo bilaogy miresaka ny tontolo iainana manerana ny tany. Any RDC, misaintsaina ny dikan'ny fifanarahana fandriampahalemana ho an'ny Gorrillas ny bilaogy Gorilla Protection ( fiarovana ny Rajako). Avy amin'ny China Dialogue, fijerena izay tohin'ny fihaonambe momba ny fiovaovan'ny toetrandro tany Bali, ary ananantsika ny fanehoankevitra vao haingana avy any Afrika Atsimo momba ny tsy fahampian'ny herinaratra sy ny fifaninanana fiarakodia tsy manimba ny tontolo ianana.
Any RDC no anombohana azy, manoratra momba ny fifanarahana fandriampahalemana izay mety hampitsahatra ny ady sy ny tsy fifanarahana an-taonany maro tany RDC ny bilaogy Gorilla Protection . Ahitàna ireo sombinà fomba fijery sy hevitr'ireo mpiandry ny ala tahirin'i Virunga momba ny vokatry ny fampiharana ilay fifanarahana mikasika ny ezaka fiarovana ny rajako ity lahatsoratra ity.
Misy ireo Mpiandry ala izay, 20 taona aty aorian'ny ady, no misalasala amin'ny fahitana ny zava-misy, ary milaza fa tsy haharitra ilay fandriampahalemana ao anatin'ilay lasi-pandaminana naroso. Rehefa nanontany an-dry zareo aho raha toa ka mandeha tsara ny zava-drehetra, “Je ne crois pas” no reko matetika. Midika hoe ” tsy mino aho”.
Maro ireo reraka, tena lanaka. Te- hanohy izy ireny. Te-hiasa. Te-hody. Ary manantena ry zareo fa hifanojo izany.
Soratan'i Feng Gao ao amin'ny bilaogy China Dialogue ny fomba fijeriny momba ireo fepetra manodidina ny ‘ làlana eo anoloan'i Bali’ ; hoy izy :
Tsy mazava ny antsipirihin'ny dingana tamin'ilay fifampiraharahàna naharitra taona roa, betsaka ny zavatra ilaina dinihina sy hamafisina. Aloha loatra raha izao raha hilaza ny vokatr'ireo fifampiraharahàna, saingy azo antoka fa eto ny fiandohàna tsara izay tiantsika ho hita. Avy amin'ity fiandohàna maha-be fanantenàna ity, dia mety hiditra anaty vanim-potoana vaovaon'ny hetsika manerantany hiadiana amin'ny fiovaovàn'ny toetrandro izao tontolo izao.
Mariho, azafady, fa ny sasamy amin'ny vaovao ifotony dia hita ao amin'ny fandrakofan'ny Global Voices ny fikaonandoha momba ny ady atao amin'ny fiovaovàn'ny toetrandro tany Bali tamin'ny iray volana ( volana Desambra 2007).
Mifamatotra ny angovo sy ny tontolo iainana, araka ny asehon'ny bilaogy Gorilla Potection, mitantara ny fomba nidarohana ireo mpiandry ala rehefa nanakana fiarabe (kamiao) nitondra arina (saribao) antsokosoko ry zareo. Fandoro ampiasain'ny ankamaroan'ny olona any ambanivohitr'i Afrika ahandroana sakafo ny arina, ary raikitampisaka ny olan'ny fandoro any amin'ny ankamaroan'ny faritra ambanivohitra ao Afrika. Ahitàna ny sarin'ireo fiarabe, ireo mpiandry ala maratra ary ny antsipirihiny misimisy kokoa momba ireo zava-nitranga ny lahatsoratra.
Any Afrika Atsimo, tsy ampy ny herinaratra ary mihitsoka ny fitaterana amin'ireo fiara fitaterana mihantona eny amin'ireo toby fiantsonan'ny fikorisàna an-dranomandry. Asehon'ilay mpitoraka bilaogy/mpanao sariitatra Jeremy Nell toy ny vazivazy an-tsary ilay zava-misy, ary manontany tena ny bilaogy The ACDP Insider hoe iza no melohina amin'ny tsy fahampian'ny herinaratra.
Ekena fa lohahevitra mafana ny tsy fahampian'ny herinaratra any Afrika Atsimo. Heveriko fa ny maro amintsika dia tsy manan-kambara firy amin'io raharaha io. Inty misy fanontaniana tsy voateny : fa ahoana no tsy ampy io zavatra fototra sy tena ilaina amin'ny fiainantsika io ? Tena tsy afa-misaraka amin'ny fomba fainantsika ny herinaratra ka toy ny dona mandrava ny rafitra izy rehefa tafintohina tsy nahy manodidina ny trano ianao amin'ny alina ka manontany tena hoe inona no atao amiko .
Raha mbola anton-dresaka ny angovo sy ny fahatapahan'ny herinaratra any Afrika Atsimo, dia ambaran'i Ray Hartley-n'ny bilaogy Thought Leader (Mpitari-kevitra ) fa fotoana mety izao handrosoan'ireo mpankafy ny angovo ara-nokleary ny heviny :
Koa satria miaina amin'ny onjan'ny “delestazy” ny firenena iray manontolo dia tsy miasa saina loatra ny amin'izay fiavian'ny herinaratra ny vahoaka raha mbola misy ny fàtana hahandroan-kanina.
Ny loza dia ny mety hitondran'io toe-javatra io ho amin'ny fanekena tsy misy fepetra ny vondrom-pihary herinaratra nokleary kasain'ny Eskom.
Mila mailo ny vondrom-piarahamonina momba izay toerana hasiana ireny fotodrafitrasa ireny sy ny fomba hanaovana ny fako raha vao miasa ry zareo.
Mbola mety ho mpifidy ny mpangataka.
Mijery izay azo hasolo ny angovo nokleary i Ian Gilfillan-n'ny Neverness, manambara hoe…
Ankoatr'izany olany hafa rehetra izany, maharitra ela fametrahana ny hery nokleary. Toy ny miandry ilay zazavavy tsara fanahin'ny nify ny fiandrasana ilay hery nokleary mba hamonjy antsika. Mila manao zavatra isika mialoha izany. Fanombohana tsara ny fampihenàna ny fangatahana amin'ny alàlan'ny fametrahana ny jiro mandrindra fifamoivoizana alefa amin'ny herin'ny masoandro, sy famanàna rano amin'ny herin'ny masoandro, fa ny hany lafiratsiny dia ilaina ny krizy mba hanatanterahana zavatra tena hita fa saropady.
Avy any Afrika Atsimo ihany koa, dia milaza ny lalao fifaninanana ampanaovin'ny PlanetThoughts ny bilaogy Greencars; fifaninanana sarinà fiarakodia tsy manimba tontolo iainana ahazoana loka 500$ izay hamafisina fa misokatra ho an'ny Afrikàna Tatsimo. Azo jerena ao amin'ny lahatsoratra ato amin'ny bilaogy ny fanampim-panazavàna.
Farananay amin'ny sarinà zanaka Rajako natolotry ny bilaogy Gorilla Protection avy any RDC ity angon-dahatsoratra ity.